Geocaching® | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Geocaching®
Geocaching® APK ကို
Geocaching တစ်ဦးစွန့်စားမှုသို့တိုင်းတည်နေရာပြန်သွားလေ၏။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဘဏ္ဍာကိုအမဲလိုက်ဂိမ်း join နှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးနည်းလမ်းသစ်၌သင်တို့လှည့်ပတ်ကမ္ဘာပေါ်မှာတွေ့ရှ။ geocaches ကိုခေါ်ပါးနဝှကျထားကွန်တိန်နာသန်းပေါင်းများစွာကိုတွေ့ခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြသည်။
ပြင်ပ Get ရွေ့လျားရနှင့်လျှို့ဝှက်တည်နေရာကိုရှာဖွေကိုယ့်ကိုကိုယ်စိန်ခေါ်, စိန်ခေါ်မှုပဟေဠိဖြေရှင်းနိုင်အခြား geocachers နှင့်အတူချိတ်ဆက်, သင်တည်ရှိသိတယ်ဘယ်တော့မှသင့်ရဲ့ကမ္ဘာ၏အစိတ်အပိုင်းစူးစမ်း။ သငျသညျအနီး geocache အခုအချိန်မှာဖြစ်ကောင်းရှိပါသည် - app ကို download လုပ်ပါနှင့်ထွက်ရှာပါ။
●ဖော်ပြချက်, မကြာသေးမီလှုပ်ရှားမှု, attribute တွေနှင့်တစ်ဦးချင်းစီ geocache များအတွက်အရိပ်အမြွက်နှင့်အတူအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကြည့်ရှုပါ
အဆိုပါ cache ကို●နေရာကိုမြေပုံ, သံလိုက်အိမ်မြှောင်, ဒါမှမဟုတ်ကားမောင်းလမ်းညွန်သုံးပြီး
သငျသညျရွှေ့အဖြစ်● Live Search ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အနီးအနား geocaches အပ်ဒိတ်
●အားလုံးလွယ်ကူသောရိုးရာ geocaches နှင့် geocaching ဖြစ်ရပ်များကိုရှာပါ
●ကို Message နဲ့အခြားအကြံပေးချက်များသည်ကစားသမားအရိပ်အမြွက်နှင့်ထို့ထက် ပို.
geocache မှ geocache ကနေခရီးသွားလာကြောင်း geocaching ဂိမ်းကိုအပိုင်းပိုင်း: ● trackables အကြောင်းကိုလေ့လာပါ
●သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေး preference ကိုရန်သင့်အညွှန်းနှင့်အကွာအဝေး settings ကို Adjust
အားလုံး cache ကိုအမျိုးအစားများနှင့် D ကို / T က ratings ၏ GeoTour cache များကိုမှ● Access ကို
လက်ျာ geocache ရှာရန်:
GC codes တွေကို, တည်နေရာ, အထင်ကရအဆောက်အနှင့်ရပ်ကွက်များအတွက်●ရှာရန်
● GT ကို code က GeoTours ရှာရန်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကို GeoTours တစ် directory ကိုတွေ့မြင်
● Log trackables - ဆုပ်ကိုင်, retrieve, တစ်စက်, သို့ကျဆင်းလာခြင်းသို့မဟုတ် Discover
●သင့် trackable စာရင်း View
●ယခု geocache Log သို့မဟုတ်နောက်မှများအတွက်မူကြမ်းအဖြစ်သိမ်းဆည်း
●ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလိုအပျကွောငျး geocaches သတင်းပို့ခြင်းဖြင့် cache ကိုအရည်အသွေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမ
● Hybrid ကို
Geocaching ပရီမီယံနှင့်အတူ ပို. ပင်စွန့်စားမှုသော့ဖွင့်:
●ပရီမီယံသာ cache များကိုအပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်မှာဆို geocache, Find
အရွယ်အစား, အမျိုးအစား, အခက်အခဲ, မြေပြင်အနေအထားများနှင့်တွေ့ရှိရ / ပိုင်ဆိုင်သည့်အားဖြင့်● ​​Filter ကို geocaches
အကွာအဝေး, အကြိုက်ဆုံးအချက်များ, ဒါမှမဟုတ် geocache နာမတော်ဖြင့် geocaches ၏●စီစာရင်း
● Geocache အချိန်မရွေး, နေရာမရွေးအော့ဖ်လိုင်းမြေပုံများနှင့်အတူ
●အစီအစဉ်, add, ဒါမှမဟုတ် Lists မနှင့်အတူသင်၏နောက်စွန့်စားမှုတည်းဖြတ်
သငျသညျအမြားဆုံးပျော်မွေ့ geocaches မှ●ဆုကိုအကြိုက်ဆုံးအချက်များ
အဆိုပါ Geocaching က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်ဖန်တီး● auto-ထပ်တူပြုခြင်း Lists မနှင့် Pocket ရှာဖွေမှုများ
အဆိုပါ Geocaching က်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှပရီမီယံ features တွေလုပ်ဖို့● Gain access ကို
ကျနော်တို့ geocachers, ရှယ်ယာဖန်တီးဖို့နဲ့ဒီဂိမ်းကိုကစားရန်အတွက်အကောင်းဆုံး tools တွေကိုတည်ဆောက်ခြင်းမှကျူးလွန်နေကြသည်။ သင့်ရဲ့ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဝင်ရောက်နှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအားဖြင့်, သင် Geocaching ၏အနာဂတ်ပုံဖော်ကူညီနေကြပါတယ်။ ဂိမ်းသင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုအပြင်, ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းပိုပြီး features တွေဝင်ရောက်ခွင့်ပိုမို geocaches နှင့်ပိုပြီးစွန့်စားမှုရ။
သင်သည်သင်၏ Google Play စအကောင့်မှတဆင့်တစ်ဦးပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ကြေးပေးသွင်းဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
မကြာမီလာမည်: သမိုင်းတွင်အကြီးမားဆုံးရတနာ heist ဖြေရှင်းနိုင်ကူညီပါ! ဤသည်လွှတ်ပေးရေးပြတိုက်, အ Geocaching HQ နွေရာသီအမှတ်တရပစ္စည်းစိန်ခေါ်မှုမှာနက်နဲသောအရာတို့ပါဝင်သည်။ geocaches နက်နဲသောအရာကိုဖြေရှင်းဖို့သဲလွန်စစုဆောင်းရန်ရှာဖွေလိုက်ပါ! ကစားစတင်ရန်ဇူလိုင်လ 11, 2019 အားဖြင့် app ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
23.14 ကို MB
Groundspeak Inc က